Akhriso Amiirkii Mujaahidiinta Darnah Oo Duqeyn Ku Shihiiday. – Calamada.com
Akhriso Amiirkii Mujaahidiinta Darnah Oo Duqeyn Ku Shihiiday.
calamada June 26, 2018 2 min read
Wararka ka imaanayo Magaalada Darnah ee dhacda Bariga wadanka Liibiya ayaa sheegaya in duqeymo xoogan oo halkaas ka dhacay uu ku shahiiday Sheikh Cadiyatulah Ashaaciri oo ahaa masuulkii guud ee Xoogaga difaaca darnah ee ka dagaalama gudaha magaalada Darnah.
Duqeynta oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee dowlada imaaraatka carabta ayaa ka dhacday xaafada qadiimiga ah ee Almaqar oo ku taala bartamaha magaalada darnah, dadka deegaankana waxa ay sheegeen in duqeymaha ay gaarayeen ilaa 20 gantaal oo is daba jog ah.
Sheikh cadiyatulah Ashaaciri Hogaamiyihi xoogaga difaaca darnah ayaa la sheegayaa inuu ku shahiiday duqeymahaasi, xilli uu ku sugnaa jiida hore ee dagaalka, halkaas oo ay isku hor fadhiyan ciidankiisa iyo Maleeshiyada uu hogaamiyo dagaal oogaha Murtad ah ee khaliifa xaftar.
Sawirada Shahiidka Sheekh Cadiyatullaah Ashaaciri ayaa lagu faafiyey baraha bulshada, waxaana si aad ah looga hadal hayaa istish-haadkiisa dhamaan wadamada caalamka islaamka.
Duqeymaha xoogan ee ka dhacay magaalada darnah ee lala beegsanayey Sheikh cadiyah ayaa lagusoo waramaya inuu ku shahiiday 1 Mujaahid oo kale oo sheekha la socday.
Shekha ayaa horey usoo ahaa hogamiyihii guud ee golaha Shuurada mujaahidiinta Darnah, ka hor intii aysan la midoobin kooxihii kale ee ka dagaalamayey gudaha magaalada, xilligaas oo ay markii danbe kumidoobeen magaca xoogaga difaaca darnah, si ay cududooda u mideeyaan, si wada jir ahna uga hortagaan duulaanka arxan darada ah ee lagusoo qaaday Magaalada Darnah.
Bishii May ayuu muuqaalkiisu Markii ugu horeysay kasoo muuqday warbaahinta, isagoona xiliga ku dhawaaqay in magacii golaha shuurada mujaahidinta Darnah laga guuray, ayna la bexeen xoogaga difaaca darnah.
Dagaalada ka socda wadanka liibiya ayaa sii xoogeysanaya, waxaana lagusoo waramaya in iminka dagaaladu ay ka socdaan xaafadaha Almagar , Xashiishah iyo shixa oo kala dhaca bartamaha iyo bariga magaalada.
Khaliifa xaftar hogaamiyaha dhiigya cabka ah ee horboodaya maleeshiyada soo weerartay magaalada darnah ayaa dilka Sheikha u arka guushii ugu weyneyd ee uu ka gaaro fagaaraha dagaalka oo la isku hor fadhiyo mud aka badan labo bil oo xiriir ah.
Duqeyntaan waxaa ka horeysay duqeyn kale oo diyaaradaha Masaarida ay la beegsadeen 25ki Bishii Ramadaan ee las dhaafay, hoygi uu daganaa Sheikh Cumar Rufaaci Suruur oo ahaa qaadigii guud ee golaha shuurada Mujaahidinta Darnah, duqeyntaas oo ay ku shahiideen sheikha, xaaskiisa iyo 5 caruur ah oo uu dhalay.
Khaliifa Xaftar oo ah hogaamiyaha maleeshyaatka Ashahaado la dirirka ah ee ku sugan wadanka Liibiya ayaa ah nin ka tirsan sirdoonka wadanka Maraykanka ee CIA loo yaqaano, waxaa uu dadaal xooggan ugu jiraa sidii uu u qabsan lahaa Magaadala xeebta ku taalla ee Darna isagoo taageero dhanka cirka iyo dhulka ah ka helaya wadamada Imaaraatka iyo Masar .
Previous: 20 Sano Kadib Dowladda Ereteria Oo Wafdi Udiraysa Magaalada Addis Ababa.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 12-Shawaal-1439 Hijri.
2 thoughts on “Akhriso Amiirkii Mujaahidiinta Darnah Oo Duqeyn Ku Shihiiday.”
Saalax mazmed says:
Allow shiikheena unaxriiso allow ugar gar mjaahidiinta meelkaata ayjoogaaa
Saalax maxmed says: